Askari Soomaali Mareykan Dil Geystay Oo Lagu Xukumay 12 Sanno Iyo 6 Bilood – somalilandtoday.com
Askari Soomaali Mareykan Dil Geystay Oo Lagu Xukumay 12 Sanno Iyo 6 Bilood
(SLT- Minnesota)-Maxamed Maxamuud Nuur oo ka tirsan Booliska gobalka Minnesota ayaa waxaa shalay la soo taagay Maxkamad, isagoo ku eedeysan inuu si kama’ ah u dilay Haweeney u dhalatay dalka Australia oo la odhan jirey Justine Damond.
Askariga waxa uu Maxkamadda ka sheegay inuu raalli-gelin ka bixinayo dilkaasi, oo uu tilmaamay in aanu si ku-talagal ah u dilin Haweeneydaasi.
Shilkaasi waxa uu dhacay bishii July 15-dii ee sannadkii 2017-kii, kadib markii ay Justine Damond soo wacday Boliska iyadoo taageero codsanaysay.
Qareenadda difacaayey askariga Soomaali Maraykanka waxay xeer-beegtida Maxkamadda ka codsadeen inay Eedeysanaha ku xukumaan hal sanno iyo hal maalin, kadib, markii uu garsoore ka tirsan Maxkamadda Minneapolis uu hore ugu xukumay bishii April ee la soo dhaafay. Balse Haweeneyda Garsooraha ka ahayd dacwadii shalay waxay Maxamed Maxamuud Nuur ku xukuntay Xabsi dhan 12 sanno iyo 6 bilood.
Dhinaca kale, Jaalliyadda Soomaalida ku nool Maraykanka waxay xukunkaasi ku tilmaameen mid Xaq-darro ah, isla markaana Maxamed Maxamuud Nuur loo beegsaday Dhalashadiisa, Midabkiisa iyo Diintiisa. Boqolaal Soomaali ah ayaana hor taagnaa Barxadda Maxkamadda, iyagoo ku dhawaaqayey hadalo ay ku codsanayeen inuu dib u helo Xorriyadiisa Mxaamed Maxamuud Nuur.